U Beddel Muuqaalka Muuqaalka 2003 Unicode PST Faylka qaab Qaabdhismeedkii hore ee 'ANSI Format' - Tilmaam Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair U Beddel Muuqaalka Muuqaalka 2003-2010 Unicode PST Faylka oo loo beddelo Qaab-dhismeedka Old ANSI
U Beddel Muuqaalka Muuqaalka 2003-2010 Unicode PST Faylka oo loo beddelo Qaab-dhismeedka Old ANSI
Fiiro gaar ah: Waa inaad ku rakibtaa Muuqaalka si aad u isticmaasho hagahan.
Laga soo bilaabo Muuqaalka 2003, qaab fayl cusub oo PST ah ayaa la soo saaray oo leh faa'iidooyin badan oo ka badan kii hore. Qaabka cusub waxaa sidoo kale loo yaqaanaa qaabka Unicode guud ahaan, halka qaabkii hore markaa loogu yeero qaab ANSI ah. Labada magacba waa la isticmaali doonaa inta lagu jiro tusahan.
In kasta oo qaabka cusubi uu aad uga fiican yahay kii hore, haddana mararka qaarkood (mostsababaha iswaafajinta) wali waxaad ubaahantahay inaad ubadasho feylka PST qaabka cusub ee Unicode qaabkii hore ee ANSI. Tusaale ahaan, waxaad dooneysaa inaad xogta PST ka wareejiso kumbuyuutar leh Muuqaalka 2003-2010 una wareejiso mid keliya oo kaliya lagu rakibo Muuqaalka 97-2002.
Microsoft ma aysan soo saarin koronto u qabata beddelkeeda. Laakiin ha ka welwelin. DataNumen Outlook Repair ayaa kaa caawin kara arrintan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan badalin fayl cusub oo Unicode PST ah oo leh DataNumen Outlook Repair, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara faylka PST.
Xulo feylka cusub ee Unicode PST sida isha isha PST ee lagu hagaajinayo:
Waxaad ku qori kartaa magaca faylka PST si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho faylka PST ee looga shaqeynayo kombiyuutarka maxalliga ah.
Maadaama faylka PST uu kujiro qaabka cusub ee Muuqaalka 2003-2010, fadlan sheeg nooca feylkiisa "Outlook 2003-2010" sanduuqa iskujira agteeda sanduuqa wax ka beddelka faylka. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Repair iskaan doonaa isha PST faylka si loo ogaado qaabkeeda si otomaatig ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah oo aan loo baahnayn.
Marka la eego, DataNumen Outlook Repair waxay keydineysaa xogta la baddelay feyl PST cusub oo la yiraahdo xxxx_fixed.pst, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha PST faylka. Tusaale ahaan, ilaha PST faylka Outlook.pst, feylka asalka ah ee la beddelay wuxuu noqon doonaa Outlook_fixed.pst. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku soo qori kartaa magaca faylka la beddelay si toos ah ama guji kan badhanka si aad u isticmaashid oo aad u doorato magaca faylka la beddelay.
Maaddaama aan dooneyno inaan u beddelno feylka 'Unicode PST' qaabka ANSI, waa inaan ku xulanno qaabka feylka PST loo beddelay "Outlook 97-2002" sanduuqa isku dhafka ah agteeda sanduuqa wax ka bedelka faylka la beddelay. Haddii aad u dejiso qaabka "Outlook 2003-2010" ama "Auto Determined", markaa DataNumen Outlook Repair waxaa laga yaabaa inay ku guuldareysato inay socodsiiso oo ay u beddesho feylkaaga 'Unicode PST'.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Repair doonaa start iskaanka iyo badalida isha Unicode PST faylka. Bar horumarka
waxay muujin doontaa horumarka beddelka.
Hawsha ka dib, haddii ilaha Unicode PST faylka loo rogi karo faylka cusub ee ANSI PST si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan ah:
Hadda faylka cusub ee PST loo beddelay wuxuu ku jiraa qaabka ANSI, oo lagu furi karo Microsoft Outlook 97-2002.
Fiiro gaar ah: Nooca demo wuxuu soo bandhigi doonaa sanduuqa farriinta soo socota si uu u muujiyo guusha beddelaadda:
Faylka cusub ee PST ee la beddelay, waxa ku jira farriimaha iyo lifaaqyada waxaa lagu beddeli doonaa macluumaad demo. Fadlan dalbo nooca oo buuxa si loo helo waxyaabaha dhabta ah ee la beddelay.